AKHRI:- Khudbaddii Sicir-bararka ee Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI • Oodweynenews.com Oodweyne News
Somaliland maanta waxaa ka jira duruufo dhaqaale oo aad u adag. Shaqo la,aan baahsan ayaa aafaysay dhalin yaradeenii. Waayeelka iyo hooyooyinku ma haystaan daryeel caafimaad iyo mid kale toona. Tiiyoo ay sidaas tahay ayaa sicir barbar ba,an oo naxariista ka fogi maalin kasta shacbiga ku sii kordhayaa.
Waxaan khamiistii 26/4/2018 soo maray qaybo ka mid magaalada Hargeysa ( sidaad ka aragteen qalabka warbaahinta). Dadkii aan waraystay waxaa ka mid ahaa hooyo Amina Ahmed Cige oo ah hooyo 45 jira ah oo 8 caruura haysata oo degan xaafada 150-ka odaygeediinu yahay askari jooga aaga bari ee Somaliland si uu u difaaco nabada aan ku naaloonayno. Waxaa ay hooyadaasi ii sheegtay inay qaataan mushahar 847000 sl lacagtan oo laba sano ka hor u dhigmaysay $121 laakiin maanta u dhiganta $ 82,=. Waxaa ay ii sheegtay inay ku jirto guri kiro ah, school iyo malcaamad lacag laga rabo, caafimaad laga rabo noloshii kaloo dhammina ay sugayso. Hooyadaasi waxay ku nooshay werwar joogtaa waxaanay la duruuftahay boqolaal kun oo hooyo oo kale.
Walaalayaal waxa istaagay ishii ugu muhimsanayd ee lacagta adagi inaga soo geli jirtay oo ahayd xoolaha nool, waxa qirin qiir ku jirta lacagtii qurba-joogtu soo diri jirtay oo xawaaladihii culays weyn uu la soo darsay oo aan xukumada kulmiye weligeed ka hadal. Waxa xataa adkaatay in dalka lacag adag lagu soo celiyo oo qofka badeecad debeda geeyaa aanu lacag caddaan u soo diri Karin waddanka, culayska ka jira dhinaca xawilaada iyo inagoo aan lahayn hab bangi oo gaadhsiisan heer caalamiya oo uu lacago waaweyn gudbin karaan.
1. Ma jiro bangi dhexe oo siyaasada lacagta fahamsan, waxaana curyaamiyay xukuumadihii KULMIYE ee kala danbeeyay oo awoodiisi meelo kale geeyay.
2. Ma jiro sharcig-lacageed “monetary law” iyo siyaasad lacageed oo qeexan oo lagu maalmulo lacagta dalkeenna.
3. Xukuumadda kulmiye ma oga dhaqdhaaqa lacageed ee suuqa sida lacagta soo gasha ta baxda iyo ta suuqu u baahan yahay.
4. Musuqmaasuqa baahay ee xukuumadii KULMIYE wuxuu sabab u noqday in in masuuliyiin ka tirsanaa xukuumadihii KULMIYE ay lacag badan oo dollar ah dalka ka saareen.
· Siyaasada maamulka lacagta (monetary policy)
· Siyaasada dhaqaalah iyo miisaaniyada (fisical policy)
· Siyaasada daah furnaanta maamulka lacagta. (public financial management)